Maka: izicelo ezichazwe kwisoftware | Martech Zone
Maka: izicelo ezichazwe kwisoftware
Ubudala beDijithali buTshintsha ngokukhawuleza yonke into
Lwesine, Disemba 11, 2014 Lwesine, Disemba 11, 2014 Douglas Karr
Xa ndithetha nabasebenzi abancinci ngoku, kuyothusa ukucinga ukuba abazikhumbuli iintsuku esasingenayo i-Intanethi. Abanye abakhumbuli ixesha ngaphandle kokuba babe ne-smartphone. Uluvo lwabo lwetekhnoloji ihlala ihleli ukuba iyaqhubeka ukuqhubela phambili. Besinamaxesha eminyaka ebomini bam apho inkqubela phambili yetekhnoloji ihleli khona… kodwa akusekho njalo. Ndikhumbula ngokucacileyo ndisebenza kunyaka we-1, unyaka we-5 kunye ne-10 ngonyaka